Izindaba - Egameni lesithombe sebhizinisi laseChina, uHainan Huayan Biotechnology Co. LTD ungene eNasdaq eNew York ukuzobungaza uguquko
Egameni lesithombe sebhizinisi laseChina, uHainan Huayan Biotechnology Co. LTD ungene eNasdaq eNew York ukuzobungaza uguquko
NgoDisemba 18, 2018, i-HYB yamenywa ukuthi ibambe iqhaza "ekuvuseleleni igagasi laseMpumalanga nokuqhubekisela phambili inkathi entsha" ukugubha iminyaka engama-40 yenguquko nokuvula imisebenzi yokukhuthaza itimu. UXia jie, usihlalo webhodi labaqondisi, uhlonishwe njengesithupha se-motherland eNasdaq, eNew York, emele imboni enkulu yezempilo ukukhombisa isithombe samabhizinisi amaShayina emhlabeni.
Ngo-1978, iSession Plenary Session yesithathu yeKomidi Elikhulu le-11 le-CPC yaphawula ukuqala kohambo lomlando wezinguquko lwaseChina nokuvula. Ukusuka ezindaweni zasemakhaya kuya emadolobheni, kusuka ekushayweni kwezindiza kuya kokunwetshwa, kusuka ekuhlelweni kabusha komnotho kuya ekujulisiseni ngokuphelele ushintsho… Eminyakeni engamashumi amane edlule, abantu baseChina babhale ngezandla zombili indumezulu yentuthuko kazwelonke kanye nezwe lonke. Izinguquko nokuvula, inguquko yesibili yaseChina, ayigcinanga ngokushintsha kakhulu iChina, kodwa futhi ithinte kakhulu uMhlaba!
Eminyakeni engama-40 edlule, amabhizinisi amaShayina aseqalile ukuphuma futhi ahambisana nezindinganiso zamazwe omhlaba. Inani elikhulu lemikhiqizo yamaShayina liye laqaphela ukuhwebelana kwembulunga yonke ngemizamo yalo, futhi i-HYB iye yaba uphawu oludumile embonini kazwelonke.
IHainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd.iqoqo locwaningo lomkhiqizo nentuthuko, ukukhiqizwa, ukuthengiswa kokuhlanganiswa kwebhizinisi lesimanje lobuchwepheshe bezempilo, likomkhulu lakhona e-haikou, eHainan. Njengamanje, inkampani inamalungelo obunikazi ahlukahlukene angaphezu kwama-40, isungula ibhizinisi elingaphezu kuka-20, cishe uhlelo olungu-10 lomkhiqizo ophelele, iminyaka engu-13 iwine "ubuchwepheshe obusha obuphezulu besayensi nobuchwepheshe besiyunithi sesifundazwe saseHainan", amaphrojekthi wobuchwepheshe besifundazwe saseHainan, " Uphiko lwe-China lwezokuphathwa kwezempilo oluvelele ”kanye nezinye izihlonipho, le nkampani ingoJulayi 2017 nguMnyango Wezezimali Kazwelonke kanye ne-State Oceanic Administration njenge" miphumela ebucayi yezwe kanye nemiphumela yamandla-kuphrojekthi yokuboniswa kwemishini yasolwandle ".
Eminyakeni yamuva, i-Huayan Company ithathe inani lamaphrojekthi we-R & D kazwelonke ayi-11. Kuze kube manje, ithole isigaba esilinganayo se-9 sophenyo lobuchwepheshe noma imiphumela yokugcina, ngezinga lokuguqulwa elifinyelela kuma-82% nezinga lokuguqulwa lonyaka lamaphrojekthi ama-3. Inkampani yelungelo lobunikazi lobunikazi bukazwelonke “isilinganiso esiphakeme sindiza uhlelo lokuguqula ukuguquguquka kwe-enzyme yesikhumba esicacile, njengokwakhiwa kwekholomu, i-pichia expression plasmid kanye nezindlela zokuhlola nezokuhlanza” (inombolo yokugunyazwa kwelungelo lobunikazi zL201210141391. X) eyodwa, yenza inkampani ibe yinhloko amaprotheni angama-isinglass ngesisekelo sobuchwepheshe be-patent yasekuqaleni, futhi kusetshenziswa ubuchwepheshe be-patent ye-enzyme - izimpukane zesikhumba i-collagenase, kukhiqiza isisindo esithile samangqamuzana e-collagen protein, imboni efanayo isendaweni ehamba phambili emncintiswaneni emazweni omhlaba.
Kusukela ukuphela kuka-2014 i-China yizinkampani ezisendaweni ephakeme kakhulu ese-haikou beauty Ann technology utshalomali lwedolobha olusha cishe lwe-100 million yuan ukwakha isisekelo sezezimboni zamaprotheni okuqala, kufaka phakathi okukhipha okungu-4 kwaminyaka yonke kwamathani ayi-1000 ezinhlanzi anamathela umugqa wokuqala wokukhiqiza we-protein peptide (inani eliphelele lamathani ayi-4000 / ngonyaka), i-workshop yokuphela komkhiqizo engu-6, isikhungo sokumaketha esisekelayo, isikhungo sokucwaninga nentuthuko (indawo yokusebenza yezemfundo), isiteshi sokwelashwa kwendle, indawo yokugcina amakhaza, indawo yokuhlala yabasebenzi, njll. faka i-fish glue iqanda le-peptide powder langempela, i-collagen peptide Nutrition kanye nemikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo, ubuhle kanye nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba nemikhiqizo ye-biomedical.